Horohoron-tany 6.7 mahery nampihorohoro an'i Shily
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Horohoron-tany 6.7 mahery nampihorohoro an'i Shily
Shilogovan'ny horohoron-tany mafy.
Horohoron-tany 6.7 mahery tokoa no namely an'i Chili androany 20 Janoary 2019, tamin'ny 01:32:51 UTC. Ny ivon-toerany dia teo amin'ny 9.7 km SSW fotsiny an'ny Coquimbo.
Araka ny tatitra tao amin'ny volcanodiscovery.com, nisy vavolombelona nijanona tao amin'ny hotely nahery setra na nihozongozona:
Marriot Santiago: Ao amin'ny rihana faha-10 amin'ny hotely 24 rihana ao Santiago. Nanomboka nihetsiketsika ny efitrano, nihovotrovotra ny fahitalavitra, nanidina ny ambainy. Nahatsapa ho very hevitra ary nifindra haingana ho eo am-baravarana, nipetraka tamin'ny gorodona mandra-pihetsiky ny 30 segondra.
Copiapo: Tany amin'ny rihana fahafito an'ny à hôtel izahay. Mipetraka any Vanuatu izahay ary efa zatra horohoron-tany… Tany amin'ny rihana fahafito ity dia tantara iray hafa. Toa tsy hijanona intsony… Miandry [aorian'ny hatairana] isika. Tsy misy zavatra tsy hita ao an-tanàna na miseho vaky.
Santiago: Mijanona ao Santiago ao amin'ny trano fandraisam-bahiny misy ny rihana faha-8 izahay, ary nihovotrovotra ny trano. Nantsoina ny fandraisana mba hanontany raha nisy horohoron-tany ary nolazaina tsia tsia. Wow. Nihovotrovotra izany.
Vin Del Mar: Amin'ny rihana faha-7 amin'ny hotely rihana 8. Nihovotrovotra ny farafara, nikotrana ny varavarana sy ny varavarankely 30 segondra na mahery.
Santiago: Ny trano fandraisam-bahiny ivangongoako. Tany amin'ny rihana 6 aho; nivadika ny rindrina ary nihetsika ny gorodona.
Ny horohoron-tany dia nisoratra anarana hatrany amin'ny 53 kilometatra.
Nisy vondrona mpampihorohoro vaovao nanapoaka fiara tany Irlandy Avaratra
Miverina any an-tsekoly: Mianatra ny fomba fijery tsara